Milan oo ku muransan mashaqada ay muquuranayso! (Hal kulan ma badin bishii Maarso!) – Gool FM
Milan oo ku muransan mashaqada ay muquuranayso! (Hal kulan ma badin bishii Maarso!)
(Milano) 04 Abriil 2016 – Waxaa lasoo werinayaa in ay dood kululi ay Milanello ku dhexmartay Adriano Galliani, Sinisa Mihajlovic iyo naadiga AC Milan.
Milan ayaa waxaa Axaddii shalay ahayd 2-1 ku garaacday Atalanta, iyadoo aan 4 kulan mar qurana badinin, haatanna waxay halis ugu jirtaa inay sanadkii 3-aad ka maqnaato Yurub gebi ahaanba.
Waloow ay kooxda Mihajlovic kaalinta 6-aad uga jirto horyaalka oo ay ku tegi karto EL, misna waxay 1 dhibic uun ka sarreeysaa Sassuolo, waxayna Milan Europa League usoo bixi kartaa haddii ay hanato Coppa Italia oo ay final-ka joogto, balse ma sahlana oo waxay wajahaysaa Juventus.
Sida uu sheegayo Sky, la guddoomiye Galliani ayaa maanta booqday Milanello isagoo aad u canaantay laacibiinta Milan oo uu sidoo kale indhaha u shitay Mihajlovic.
Warka ayaa sheegaya in Galliani uu laacibiinta waydiiyey inay 9 kulan guuldarro la’aan ahaayeen iyagoo garaacay Fiorentina iyo Inter barbarrana la noqday Napoli, balse aan haatan hal kulan badinin bishii Maarso oo dhan.
Waxaa dheeraad ah, in su’aal laga keenay waxa Milan ka khaldama markii lagasoo laabto ciyaaraya caalami, waayo Rossoneri waxaa laga badiyey 4 ka mid ah 5 kulan oo laga soo noqday ciyaaro caalami.
SAWIRRO: Daawo waayihii ciyaareed ee Antonio Conte oo sawirro xul lagusoo koobay!
JUVE VS NAPOLI: Ka bogo 7-da kulan ee u kala harsan labadan kooxood!